Wasaaradda A. Gudaha oo rajo ka muujisay in odayaasha ka maqan shirka Jowhar inay ku soo biiraan – STAR FM SOMALIA
Xoghayaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Yaxye Cali Ibraahim ayaa qiray inuu jiro caqabado dhinaca odayaasha dhaqanka ee shirka ka maqan, isagoo xusay inuu socdo kulamo iyo u kala dab qaadista ergooyinka shirka ka qeyb qaadanaya.
“Caqabado dhinaca odayaasha dhaqanka ee shirka ka maqan ayaa jira, laakiin dowladda Federaalka kama sabarsana, howshaas gacanta ayaa lagu hayaa u kala dab qaadisteeda ayaa socda, rajo fiican ayaa ka qabnaa in odayaasha maqan inay gogosha ku soo biiraan”ayuu yiri Yaxye Cali Hareeri.
Waxaa uu sheegay in hanaanka loo marayo maamul u sameynta labada gobol ay qorsheynayaan in dhamaadka bisha Ramadaan ku soo gaba gabeeyaan, isla markaana ay howsha socota la xoojin doono.
Shirka maamul u sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/Dhexe ayaa wali jahwareer ku jira, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda Gobolka Hiiraan ayaa horay u qaaday shirka, iyagoo diiday inay tagaan magaalada Jowhar oo ah halka ay taalo gogosha.
Shaqaale ka mid ah Garoonka Aadan Cadde oo Muqdisho lagu dilay